ကိုချစ်ဖေ ၏ မရေးမနေနိူင်ခြင်းများ: စစ်အစိုးရ အကျဉ်းထောင်အတွင်း ကျနော်ကြုံခဲ့ရသမျှ တစိတ်တဒေသ(၉)
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 11:57 PM
yawnetthan, November 19, 2009 at 12:41 AM
Anonymous, November 19, 2009 at 2:14 AM
I like to read this very much.
Always waiting to read.
Thanksalot for your's sharing.
မဆုမွန်, November 19, 2009 at 2:15 AM
စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ ပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲ တော်တော်ထိခိုက်မိတယ်...အမေ့ခံအကျဉ်းသားတွေ ဘ၀တွေကို ရေးပြပေးလို့ကျေးဇူးတင်တယ်..လူမဆန်မူတွေက လွတ်မြောက်ဖို့ ပိုပြီး တာဝန်တွေကြိးလာတယ်လို့မြင်မိတယ်..
Anonymous, November 19, 2009 at 2:16 AM
Carry on! Everytimes... waiting for reading yours.
tatto, November 19, 2009 at 8:39 AM
ကဗျာဦး, November 19, 2009 at 2:07 PM
အစ်ကိုတိုးဆီမှာမန့်ခဲ့တဲ့ ပုရှကင်ရဲ့ ဆိုက်ဗေးရီးယားကဗျာလေးကိုပဲ
သင်တို့ကို တံခါးဝက ဝမ်းပန်းတသာ ကြိုနေမယ်
ညီနောင်များက သင်တို့ကို ဓါးတွေပြန်နှင်းကြမယ်
Nge Naing, November 19, 2009 at 2:28 PM
အကျဉ်းသားတွေရဲ့ ဘ၀ကို တင်ပြပေးလို့ အခုလို သိခွင့်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီလို လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်နေတာ မြန်မာပြည်မှာ အကျင့်သားရနေပြီထင်တယ်။ ထောင်သွင်းအကျဉ်းကျ ခံနေရတဲ့ သူတယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးက သက်ဆိုင်ရာက ပဲတာဝန်ယူရမှာ ဖြစ်တယ်။ မတရားဘူးထင်လို့ တရားပြန်စွဲလို့လည်း မရနဲ့ တခြားနိုင်ငံမှာ သာမာန်မဟုတ်တာတွေအားလုံး မြန်မာပြည်မှာ သာမာန်ကိစ္စတွေ ဖြစ်နေကုန်ပြီ။
Ko Oo, November 19, 2009 at 5:41 PM
ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့ဆီ လာလည်သွားတဲ့အတွက်ရော လင့်ဂ် လုပ်ပေးထားအတွက်ပါ ကျေးဇူးပါပဲ။
ဆောင်းယွန်းလ, November 20, 2009 at 8:22 PM
ရောက်မှပဲ လာဖတ်ဖြစ်တယ် ကိုတင်နိုင်ထွန်းရေ..